बेनाड्रिल बनाम क्लेरटिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल समुदाय, कम्पनी समुदाय औषधि जानकारी, समाचार चेकआउट औषधि बनाम मित्र खेलहरु कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> बेनाड्रिल बनाम क्लेरटिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
बेनाड्रिल बनाम क्लेरटिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
तपाईं बस्ने ठाउँमा निर्भर गर्दै, एलर्जी मौसम पहिले नै यहाँ छ, यदि कुनाको वरिपरि ठीक छैन भने। केही व्यक्तिहरूको लागि, मौसमी एलर्जी एक सानो चिढ्का हुन्छ। अरूहरूको लागि, मौसमी र ​​वर्षभर एलर्जीले एन्टिहिस्टामाइनको आवश्यकतालाई औंल्याउन सक्छ। जबकि त्यहाँ धेरै उपचार विकल्पहरू छनौट गर्न सकिन्छ, तिनीहरू बीचका भिन्नताहरू जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
बेनाड्रिल (डिफेनहाइड्रामिन) र क्लेरटिन (लोराटाडाइन) दुई सामान्य ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) औषधि हो जसले एलर्जीका लक्षणहरूको उपचार गर्न सक्छ। जब तपाईं एलर्जन्सको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ जस्तै धुलोकोट, पाल्तु जनावरको छाला, वा परागकणको रूपमा, तपाईंको शरीरले रसायन भनिने रासायनिक रिलीज गर्दछ। हिस्टामाइन । यो रसायन छींकने, बहेको नाक, र खुजली, पानी आँखा पैदा गर्न को लागी जिम्मेदार छ। एन्टिहिस्टामाइन ड्रग्स यी लक्षणहरू उपचार गर्न र रोक्नको लागि हिस्टामाइन रोक्दै काम गर्दछ।
बेनाड्रिल र क्लेरटिनले समान तरिकाले काम गर्न सक्दछन्, तर तिनीहरू औषधीको विभिन्न प्रकारका छन्। हामी यी औषधिहरू तुलना गर्नेछौं र उनीहरूले कसरी काम गर्दछन्, तिनीहरूको लागत, र उनीहरूका साइड इफेक्टहरूमा उनीहरूको भिन्नताहरू छलफल गर्दछौं।
सम्बन्धित: डिफेनहाइड्रामिन कुपनहरू डिफेनहाइड्रामिन भनेको के हो? | Loratadine कूपन | Loratadine के हो?
बेनाद्रील र क्लेरटिन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
बेनाद्रील र क्लेरटिनको बिच सब भन्दा ठूलो भिन्नता भनेको बेनाड्रिलले क्लारटिन भन्दा बढी निन्द्रा ल्याउने सम्भावना छ। बेनाड्रिल, यसको जेनेरिक नाम डिफेनहाइड्रामिनबाट पनि परिचित छ, पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन भनेर चिनिन्छ। एन्टीहिस्टामाइन्सको यो समूह पहिलो औषधि विकसित भयो एलर्जी लक्षणहरूको उपचार गर्न।
robitussin मा सक्रिय संघटक के हो?
क्लेरटिनलाई यसको जेनेरिक नाम लोराटाडाइन द्वारा पनि चिनिन्छ, दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। अर्को शब्दमा, क्लेरटिन नयाँ एन्टीहिस्टामाइन्सको समूहको हिस्सा हो। दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्स एलर्जीको लक्षणहरूको उपचार गर्न विकसित भयो जुन पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्स भन्दा निन्द्रा बिना नै भयो।
क्लेरटिन एक पटक ट्याब्लेटको रूपमा लिईन्छ जबकि बेनाड्रिललाई दिनभरि धेरै पटक लिनु आवश्यक पर्दछ। यो किनभने क्लेरीटिन शरीरमा बेनाड्रिल भन्दा लामो समयसम्म रहन्छ।
बेनाद्रील र क्लेरटिन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एन्टीहिस्टामाइन
पहिलो पुस्ता एन्टीहिस्टामाइन
जेनेरिक नाम के हो? डिफेनहाइड्रामिन Loratadine
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक क्याप्सूल
मौखिक सिरप मौखिक क्याप्सूल
मानक खुराक के हो? २ mg ​​मिलीग्रामदेखि mg० मिलीग्राम प्रत्येक to देखि hours घण्टा १० मिलीग्राम दैनिक एक पटक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो अवधि को उपयोग छोटो अवधि वा लामो अवधि को उपयोग एक चिकित्सक द्वारा निर्देशन अनुसार
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र २ बर्ष र माथिका बच्चाहरू वयस्क र २ बर्ष र माथिका बच्चाहरू
बेनाद्रीलमा सब भन्दा राम्रो मूल्य चाहिन्छ?
Benadryl मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
शर्तहरु बेनाद्रील र क्लेरटिन द्वारा उपचार
Benadryl र Claritin दुबै एफडीए-अनुमोदित हो एलर्जीको लक्षणहरूको उपचार गर्न।
दुबै एलर्जी औषधीहरूले एलर्जीको राइनाइटिसलाई उपचार गर्न सक्दछन्, जसलाई घाँटी ज्वरो पनि भनिन्छ। एलर्जी राइनाइटिस लक्षणहरूको एक समूह हो जसले नाकलाई भीड र छींक जस्ता असर गर्दछ। दुबै औषधिहरूले एलर्जीक कन्जाक्टिवाइटिसको उपचार गर्न सक्छ जसले आँखामा जलन र खुजली निम्त्याउँछ। एन्टीहिस्टामाइन्स जस्तै बेनाड्रिल वा क्लेरटिनले छाला अives्कु (पित्ती) र एलर्जीबाट खुजली (प्रुरिटस) को उपचार पनि गर्न सक्छ।
किनकी बेनाड्रिलको राम्रा गुणहरू छन्, यो अक्सर एक्लो वा अनिद्राको लागि अन्य औषधिहरूको साथ प्रयोग हुन्छ। यो कहिलेकाँही एकल डोजको रूपमा प्रयोग गरीन्छ निद्रा लाग्ने मानिसहरूलाई मद्दत गर्न।
बेनाड्रिललाई पार्किन्सन रोगका लक्षणहरू जस्तै कठोरता र कम्पनिको उपचार गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जो मानिसहरू गति रोगको अनुभव गर्छन्, बेनाड्रिल मतली, बान्ता, र चक्कर आउन रोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सर्त बेनाड्रिल क्लेरटिन
एलर्जी राइनाइटिस हो हो
एलर्जीको नेत्रश्लेष्मलाशोथ हो हो
पित्तीहरू हो हो
खुजली हो हो
अनिद्रा हो हैन
गति बिमारी हो हैन
पार्किन्सनवाद हो हैन
के Benadryl वा Claritin अधिक प्रभावी छ?
जबकि बेनाड्रिल र क्लेरटिन एलर्जी लक्षणहरूको उपचारको लागि त्यस्तै प्रभावकारी छन्, क्लेरिटिनले कम सेड्टिंग साइड इफेक्टहरू प्रदान गर्दछ। यस कारणले गर्दा क्लेरटिनलाई प्रायः बेनाड्रिलमा मनपर्दछ।
अमेरिकी Otolaryngology- हेड र घाँटी सर्जरी को अकादमी द्वारा विकसित र द्वारा समर्थित दिशानिर्देशहरु अनुसार अमेरिकी पारिवारिक चिकित्सकहरूको एकेडेमी (एएएफपी), दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्सलाई छींक र खुजली जस्ता एलर्जिक राइनाइटिसका लक्षणहरू उपचार गर्न सिफारिस गरिन्छ।
एलर्जी, दमा, र ईम्युनोलजी को अमेरिकी एकेडेमी बाट अन्य दिशानिर्देशहरू ( AAAAI ) अनुनासिक स्टेरोइड प्रयोग गर्न सुझाव दिनुहोस् फ्लोनेज वा नासाकार्ट मौखिक एन्टीहिस्टामाइन को उपयोग थप्नु अघि एलर्जी राइनाइटिस को लागी।
बाट अनुसन्धान साहित्य समीक्षा फेला पारे कि नयाँ एन्टिहिस्टामाइन्सहरू जस्तै लराटाडाइन पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्स भन्दा सुरक्षित छन्। अध्ययनले अन्य दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्सलाई पनि तुलना गरेको जस्तै Zyrtec (cetirizine) र Allegra (फेक्सोफेनाडाइन)। अध्ययनले पत्ता लगायो कि सेर्टिजाइन वा फेक्सोफेनाडाइन हुन सक्छ बढी प्रभावकारी loratadine भन्दा।
एन्टिहिस्टामाइन छनौट तपाईंको समग्र अवस्थामा निर्भर गर्दछ। तपाईंको डाक्टर वा फार्मासिष्टसँग कुरा गर्नुहोस् कुन उपचार विकल्प तपाईंको लागि उत्तम हो भन्ने निर्धारण गर्न।
सम्बन्धित: Zyrtec के हो? | Allegra के हो?
कभरेज र लागत तुलना Benadryl बनाम Claritin
बेनाड्रिल एक ओभर-द-काउन्टर औषधिको रूपमा खरीद गर्न सकिन्छ। धेरै मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू यस कारणले बेनाड्रिललाई कभर गर्न सक्दैन। बेनाड्रिल यसको जेनेरिक फार्म डिफेनहाइड्रामिनमा व्यापक रूपमा उपलब्ध छ। धेरै फार्मेसीहरू, किराना स्टोरहरू, र बिग-बक्स खुद्रा विक्रेताहरू पनि आफ्नै स्टोर ब्रान्डमा डिफेनहाइड्रामिन बोक्छन्। बेनाड्रिलको लागत १$ $ सम्म हुन सक्छ। यदि तपाइँको डाक्टर द्वारा निर्धारित गरीएको छ भने, Benadryl (Benadryl कूपन) एक सिंगलकेयर कूपनको साथ $ २ अन्तर्गत खर्च हुन सक्दछ।
क्लेरटिन (क्लेरीटिन कुपन) बक्समा आउँदछ quant ट्याब्लेटदेखि १०० ट्याब्लेटहरू सम्मिलित। यो ओभर-द-काउन्टर ब्रान्ड-नाम क्लेरटिन वा जेनेरिक लोराटाडाइनको रूपमा किन्छ। धेरै मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले क्लारिटिनलाई कभर गर्न सक्दैनन त्यसैले यो तपाईंको बीमाको साथ जाँच गर्न उत्तम हो। Claritin को औसत खुद्रा लागत $ 30 को आसपास छ। एक प्रिस्क्रिप्शनको साथ, एकलकेयर लागत $ 4- $ 10 हो
सम्बन्धित: बेनाड्रिल के हो? | Claritin के हो?
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? हैन हैन
सामान्यतया चिकित्सा द्वारा कभर? हैन हैन
मानक खुराक २ mg ​​मिलीग्राम ट्याब्लेट (of० को मात्रा) १० मिलीग्राम (of० को मात्रा)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे । २ $ 18- $ 44
एकलकेयर लागत $ 1.52 + $ - $ १०
बेनाद्रील र क्लेरटिनको साधारण साइड इफेक्टहरू
एन्टीहिस्टामाइन्समा अक्सर साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन् कि केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) लाई असर गर्दछ। एन्टीहिस्टामाइन्सको सामान्य सीएनएस साइड इफेक्टहरू जस्तै बेनाड्रिल र क्लेरटिनमा निन्द्रा, बेहोरा, चक्कर आउने, टाउको दुख्ने, र समन्वयको कमी समावेश छ। यद्यपि पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइनको रूपमा, बेनाड्रिल नयाँ एन्टीहिस्टामाइन्सको तुलनामा अधिक सीएनएस साइड इफेक्ट पैदा गर्न परिचित छ।
Benadryl र Claritin को अन्य साइड इफेक्ट सामिल छन् सुख्खा मुख , सुख्खा वा घाँटी दुखाइ, र छाला दाग यी औषधिहरूले पचाउने साइड इफेक्टहरू जस्तै बमली, पखाला, र कब्जहरू निम्त्याउन सक्छ।
एन्टीहिस्टामाइन्सको अधिकतर साइड इफेक्टहरू हल्का र सहन योग्य हुन्छन्। साइड इफेक्टहरू कसरी एक व्यक्तिले औषधीमा प्रतिक्रिया दिन्छमा निर्भर हुन्छ र सबैको लागि एक समान नहुन सक्छ।
तन्द्रा हो * रिपोर्ट गरिएको छैन हो *
Sedation हो * हो *
चक्कर हो * हो *
टाउको दुखाई हो * हो *
समन्वयको अभाव हो * हो *
सुख्खा मुख हो * हो *
दुखेको वा सुख्खा घाँटी हो * हो *
छाला दाग हो * हो *
पखाला हो * हो *
कब्ज हो * हो *
यो देखा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावहरूको पूर्ण सूची नहुन सक्छ। अधिक जान्नको लागि कृपया तपाइँको डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
एक ह्या hang्गओभर बाट छुटकारा पाउने सबैभन्दा राम्रो तरीका
स्रोत: डेलीमेड ( बेनाड्रिल ), डेलीमेड ( क्लेरटिन )
बेनाड्रिल बनाम क्लेरटिनको ड्रग अन्तर्क्रिया
एन्टीहिस्टामाइन्सहरू जस्तै बेनाड्रिल र क्लेरटिनले अन्य ड्रगहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन् जुन समान प्रभावहरू छन्। पहिलो र दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्स सावधानी अपनाउनु पर्दछ वा सीएनएस डिप्रेशनन्ट ड्रग्स जस्तै सम्मोहन, बेंजोडाइजेपाइन, बार्बिटुरेट्स, एन्टिकोनभल्सेन्ट्स, र मांसपेशिमा आराम गर्ने कामबाट सावधान हुनुपर्दछ। ओपियोइड्समा सीएनएस डिप्रेसनन्ट प्रभावहरू पनि हुन्छन् जुन एन्टिहिस्टामाइनसँग मिलाउँदा बढाउन सकिन्छ।
Benadryl वा Claritin प्रयोग गर्नुहुन्न यदि तपाईं लिदै हुनुहुन्छ मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधक (MAOI) वा MAOI रोके पछि २ हप्ताका लागि। यी औषधिहरू सँगै लिँदा प्रतिकूल प्रभावहरूको बढ्दो जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
एन्टीहिस्टामाइन्सको साथ एन्टिकोलिनर्जिक औषधिहरू प्रयोग गर्नाले सुख्खा साइड इफेक्टहरू जस्तै सुक्खा मुख वा सुख्खा घाँटी बढ्न सक्छ
औषधि ड्रग क्लास बेनाड्रिल क्लेरटिन
Isocarboxazid मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधक (MAOI) हो हो
Zolpidem सम्मोहन हो हो
Diazepam बेन्जोडियाजेपाइन हो हो
सेकोबारबिटल बार्बिटुरेट हो हो
गाबापेन्टिन एन्टिकोनभल्सेन्ट हो हो
Carisoprodol मांसपेशी आराम हो हो
Codeine ओपियोइड्स हो हो
ऑक्सीबुटीनिन एन्टिकोलिनर्जिक हो हो
यो औषधी अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची होइन। यी औषधिहरू लिनु अघि कृपया आफ्नो डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्।
Benadryl र Claritin को चेतावनी
Benadryl वा Claritin प्रयोग गर्नु हुँदैन यदि तपाईसँग प्याकेजमा लेबल लगाईएको कुनै पनि सक्रिय सामग्रीमा एलर्जीको प्रतिक्रिया छ। यी औषधीहरू सेवन गर्दा अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया हुन सक्छ, जस्तै सास फेर्न समस्या वा गम्भीर दाग, यदि तपाईंसँग औषधिमा एलर्जी छ भने।
एन्टिहिस्टामाइन्सले बढि निन्द्रा र निन्द्रा ल्याउन सक्ने हुनाले कार चलाउँदा वा अपरेटिंग मेसिनरी जस्ता केही क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुँदा तिनीहरूको प्रयोग सावधानी अपनाईन्छ।
Ad 65 बर्ष वा माथि उमेरका वयस्कहरूमा बेनाड्रिलको सिफारिश हुँदैन। Benadryl लिने जोखिम बढाउन सक्छ डिमेंशिया वा संज्ञानात्मक कमजोरी, प्रलोभन, र बेहोश।
कसरी मुक्त गर्न को लागी मधुमेह परीक्षण स्ट्रिप्स प्राप्त गर्न को लागी
Benadryl वा Claritin प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् यदि तपाईलाई दमा, कलेजो रोग, वा मृगौला रोग छ भने।
बेनाड्रिल बनाम क्लेरटिनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
बेनाड्रिल भनेको के हो?
बेनाड्रिल डिफेनहाइड्रेमाइनको ब्रान्ड नाम हो। यो पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन हो जसले एलर्जीका लक्षणहरूको उपचार गर्न सक्छ। बेनाड्रिल अनिद्रा, गति बिमारी, र पार्किन्सनिजमको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सामान्यतया हरेक to देखि hours घण्टा लिन्छ।
Claritin के हो?
Claratin लराटाडाइन HCl को ब्रान्ड नाम हो। यो दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन हो जसले एलर्जीका लक्षणहरू जस्तै छींकने, नाक बग्ने, र आँखा खुजली गर्ने उपचार गर्न सक्छ। क्लेरटिन एक ओभर-दि-काउन्टर औषधि हो जुन दैनिक रूपमा एक पटक लिन्छ।
के बेनाड्रिल र क्लेरटिन एकै हुन्?
होईन। बेनाड्रिल र क्लेरटिन एकै होइनन्। Benadryl फरक तरिकाले काम गर्दछ र Claritin को तुलनामा फरक साइड इफेक्ट प्रोफाइल छ। क्लेरटिन बेनाद्रील भन्दा नयाँ औषधि हो।
के बेनाड्रिल वा क्लेरटिन राम्रो छ?
एलर्जीको राइनाइटिस र अन्य एलर्जी लक्षणहरूको लागि बेनाड्रिलमा प्रायः क्लेरटिन सिफारिस गरिन्छ। दुबै औषधीको समान प्रभावकारिता छ तर क्लेरिटिनले कम सेडेटिंग साइड इफेक्टहरू छन्। क्लेरटिन दैनिक एक पटक मात्र लिनु पर्छ जुन केही मानिसका लागि रुचिकर हुन सक्छ।
के म गर्भवती हुँदा बेनाड्रिल वा क्लेरटिन प्रयोग गर्न सक्छु?
Benadryl र Claritin गर्भावस्था को समयमा प्रयोग को लागी सुरक्षित छ। यस अनुसार CDC धेरैजसो एन्टिहिस्टामाइन्स जन्म दोषहरूको कारण देखाईएको छैन। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा गर्भावस्थाको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एन्टिहिस्टामाइन प्रयोग गर्नु अघि आफ्नो चिकित्सकसँग जाँच गर्नुहोस्।
के म Benadryl वा Claritin रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
एन्टीहिस्टामाइन्स जस्तै बेनाड्रिल वा क्लेरटिन सिफारिश गरिदैन रक्सीको साथ प्रयोग गर्नुहोस् । रक्सीको साथ यी औषधीहरू लिईएको चक्कर वा निद्राजस्ता प्रतिकूल प्रभावहरूको जोखिम बढ्न सक्छ।
के यो Claritin र Benadryl लिन ठीक छ? / के म Benadryl १२ घण्टा Claratin पछि लिन सक्छ?
यो लिन सिफारिस गरिएको छैन Claritin र Benadryl एक साथ । किनभने उनीहरूसँग समान प्रभावहरू छन्, तिनीहरूलाई सँगै लिनाले प्रतिकूल प्रभावहरूको जोखिम बढाउन सक्छ। क्लेरटिनसँग तुलनात्मक हिसाबले लामो आधा जीवन हुन्छ त्यसैले क्लेरटिनको १२ घण्टा पछि बेनाड्रिल लिन सुरक्षित हुँदैन। बहु एन्टिहिस्टामाइन्स लिनु अघि चिकित्सा सल्लाहका लागि डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्।
Benadryl मा लात लिनको लागि कति समय लाग्छ?
बेनाड्रिल २ घण्टा भित्र शरीरमा चरम तहमा पुग्छ। यद्यपि बेनाड्रिलको प्रभाव धेरै चाँडै महसुस हुन सक्छ।
के क्लारटिनले वास्तवमै २ 24 घण्टा टिक्छ?
हो क्लेरटिन एक दैनिक गोली हो जसको प्रभावहरू छन् जुन लगभग २ hours घण्टासम्म रहन्छ। को आधा जीवन लगभग १० घण्टा लोर्याटाइनको लागि र २ active घण्टा सम्म यसको सक्रिय मेटाबोलिट डेस्कारबोथोक्साइलोराटाइनमा छ।
के क्लारिटिनले तपाईंलाई रातमा जागा राख्छ?
एक्लै क्लेरटिनले साधारणतया अनिद्राको कारण गर्दैन। जे होस्, क्लेरिटिन-डी, जसले स्यूडोफेड्रिन (Sudafed) समावेश गर्दछ, रातमा निदाउन समस्या हुन सक्छ। यो किनभने स्यूडोफेड्रिन एक उत्तेजक decongestant हो।
एनीमिया को लागी9सर्वश्रेष्ठ खाना
जानविया साइड इफेक्ट र कसरी तिनीहरूबाट बच्ने
कोलास कति लामो समय सम्म तपाइँको प्रणाली मा रहन्छ
त्यहाँ कस्तो प्रकारको रगत छ
काउन्टर मा mometasone furoate नाक स्प्रे
नासाकोर्ट लाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
जब तपाइँ गर्भवती हुनुहुन्छ तब तपाइँ मतली को लागी के लिन सक्नुहुन्छ
zoloft तपाइँको शरीर लाई के गर्छ
के तपाइँ अझै पनी योजना बी संग गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ?